एमालेले मुख्यमन्त्री यसरी छान्ने : २ नं. प्रदेशमा मधेसी तान्न यस्तो कार्ड फालियो – नेपाली सूर्य
January 31, 2018 August 14, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on एमालेले मुख्यमन्त्री यसरी छान्ने : २ नं. प्रदेशमा मधेसी तान्न यस्तो कार्ड फालियो
काठमाडौ । एमालेले भावी मुख्यमन्त्री चयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रेदशको संसदीय दललाई दिएको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो भागमा परेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका प्रत्याशीबीच सहमति नभए गोप्य मतदानबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि प्रदेश नम्बर २ मा भावी मुख्यमन्त्रीको चयन आफ्नो संसदीय दलबाट गर्ने जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको साझेदारीमा आफ्नो भागमा परेका दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर ५ मा सर्वसम्मतिमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसेकको एमालेको मंगलबार भएको स्थायी कमिटी बैठकले बाँकी तीनवटा प्रदेशका प्रत्याशीको चयन राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णयमा ुएकभन्दा बढी उम्मेद्वार भएमा गोप्य मतदानबाट त्यसको टुंगो लगाउनेु भनिएको छ। एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको सहमति अनुसार पाएका चारवटा प्रदेशमध्ये १, ३ र ४ का भावी मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन बाँकी छ।
जहाँ एकभन्दा बढी प्रत्याशी देखा परेका छन्। विभिन्न साथीहरुले इच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। निर्वाचनको मितिसम्म पुग्दा प्रदेश नम्बर ५ मा जस्तै सहमति हुनसक्ला, भएन भने मतदानबाट टुंगिन्छ उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, । विभिन्न साथीहरुले इच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। निर्वाचन मितिसम्म पुग्दा प्रदेश नम्बर ५ मा जस्तै सहमतिमै हुनसक्ला, भएन भने मतदानबाट टुंगिन्छ।
यता प्रदेश नम्बर २ मा चुनावी गठबन्धन बनाएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको बहुमत छ । बहुमत टुटाउन वाम गठबन्धनले कार्ड फालेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य महेन्द्र राय यादवका अनुसार त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पूर्वसहमति अनुसार फोरम नेपालबाट मुख्यमन्त्री हुनेछन्। तर राजपाले नमानेको खण्डमा एमालेसँग मिल्नका लागि प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले दुईवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् फोरम नेपालका कोषाध्यक्ष विजयकुमार यादवका अनुसार आउँदो २० गते डाकिएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट भावी मुख्यमन्त्रीको निम्ति नेता चयन हुने सम्भावना छ। उनले भने, लोकतान्त्रिक विधिबाट सहमतिमा छान्ने हो, सहमति नभएमा चुनाव हुनसक्छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट सहमतिमा छान्ने हो, सहमति नभएमा चुनाव हुनसक्छ विजयकुमार यादव, कोषाध्यक्ष, फोरम नेपाल कोषाध्यक्ष यादव स्वयं मुख्यमन्त्रीका एकजना दाबेदार हुन्। त्यसप्रदेशको जातीय सन्तुलन र पार्टी नेतृत्वको रुचिबारे जानकारहरुले उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बढी सम्भावना रहेको औंल्याएका छन्।
प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताइएको छ । पश्चिम नेपालका दुईवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। प्रदेशबाट आएका सिफारिसका आधारमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसबारे निर्णय गर्ने उक्त दलले जनाएको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये छ वटामा वामपन्थी गठबन्धन र एउटामा तराई–केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछन्। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा छैन। pathibharanews बाट साभार!
बुटवलको हस्पिटल लाइनमा ट्रिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालक गम्भीर घाइते !!
December 17, 2017 December 17, 2017 Nepali Surya